Ubudlelwane Hub - Iingcebiso zobudlelwane basimahla kwiingcali
Iingcebiso zobudlelwane basimahla kwiingcali
in bengqondo, Imibuzo
[IMIBUZO] Ngaba ngu-IA uMhlobo ombi?
Ukuba ngumhlobo ombi kubi kodwa uyazi ukuba uninzi lwabantu lungabahlobo ababi hayi iqabane labo? Ndiyaqonda ukuba oku kungavakala kungaqhelekanga kwaye kungenxa yoko le nto sidale le mibuzo imfutshane ukukunceda wenze isigqibo esisiso. Kule mibuzo, silungiselele imibuzo ebalulekileyo […] Kaninzi
by I-RHB hlaziywa 10:12 am, 10:12 am
Kutheni abantu abaninzi befuna ukuthula?
Ufuna ukwazi ukuba kutheni abantu abaninzi befuna ukuthula hayi ingxolo okanye indawo enengxolo. Kulungile, mandikwabelana nawe ngale mfihlo endiqinisekileyo ukuba ubuyiva kakhulu kubantu abathanda ukuthula. Ukuthula kunceda umntu aphumle, kunceda uluvo lwakho ukuba luzole xa ufuna […] Kaninzi
Kutheni Imozulu eshushu Indinika Ixhala?
Bendizibuza ukuba kutheni imozulu eshushu indinika ixhala kwaye kwinkqubo, ndenze uphando oluninzi ndizama ukufumanisa ukuba kutheni kwaye ndingenza ntoni ukundinceda oku kwaye kwinkqubo yolo phando ndifumene iindlela ezininzi ukuze yiyo loo nto, kweli nqaku, ndiye […] Kaninzi
Kutheni Kubalulekile Ukuzazi?
Ngaba ubuzibuza ukuba kutheni ukuzazi kubalulekile? Ukuba ewe, ke mandikubuze oku, ngaba ukhe wathatha isigqibo ebomini bakho ngaphambili kwaye wabuya wahlala wacinga ngale nto uyenzileyo ukuba sisigqibo esilungileyo okanye hayi? Emva koko oko kuzazi emsebenzini. Qhubeka ufunda. Unokuphinda ucinge kwakhona ngeyakho […] Kaninzi
Ngaba iCaffeine indenza ndibenexhala?
Most times, when I take caffeine, I discover that I am very active in anything I want to do, I can stay up all night to get something does, I am so alert and anxious at the same time without any reason and when this happens, I do ask myself “is caffeine making me have […] Kaninzi
UMBUZO: Ngaba ukhanyiswa ngegesi?
Ukukhanyisa igesi yindlela yokukhohlisa abantu ukuba babuze iingqondo zabo. Nangona oku kunokuvakala kutsha, kodwa kudala kukho ixesha elide ngoku. Uninzi lwabantu ngoku lujongwe ngegesi ngumntu, nokuba ngumhlobo wabo, usapho okanye iqabane kwaye abazi. Kule mibuzo, siza kube sikunceda […] Kaninzi
by I-RHB hlaziywa 3:09 emva kwemini, ngo-3:09 emva kwemini
Ndomelela Njani Ngengqondo?
Ndenze njani ukuba ndiqine ngokwasengqondweni ngumbuzo ekumele ukuba wonke umntu uyawubuza kuba akukho nto sinokuyenza kweli lizwe likhuphisanayo kule mihla siphumelele singaqinanga ngokwasengqondweni. Ewe, undive kakuhle. Ukomelela ngokwasengqondweni kubaluleke kakhulu kubomi bethu yiyo loo nto kweli nqaku, […] Kaninzi
by I-RHB 12:05 emva kwemini, ngo-12:05 emva kwemini
Ndikhula Njani NjengoMntu?
Life is never a bed of roses, wonke umntu kufuneka avuke ayilwele into akholelwa kuyo.ufuna ukuyenza ebomini ukuze abantu bakuhloniphe ngendlela abahlonipha ngayo abanye,kuzofuneka uhlale phantsi usebenzele. kungakhathaliseki ukuba sivela phi na. Kodwa […] Kaninzi
by I-RHB 12:00 emva kwemini, ngo-12:00 emva kwemini
Ijongeka njani iNarcissist?
I-narcissist ngumntu ozicingela yedwa. Umntu osoloko ethetha ngaye yonke into. Bangamaqhude, banekratshi, njl.njl. ngabantu abathanda amandla, ukuhoywa, ukuncoma, njl. Ngaba usazibuza ukuba i-narcissist ibonakala njani usebenzisa imizekelo? Emva koko sikufumene. Kweli nqaku, siza […] Kaninzi
Iyintoni inkcazo yePsychopath?
Emva kokujonga isichazi-magama sakho malunga nenkcazo ye-psychopath, ngaba usafuna ukukhanyiselwa ngakumbi malunga nokuba yintoni inkcazo ye-psychopath? Kulungile, ukwindawo elungileyo kuba kanye apha, siza kuyiqhekeza ngakumbi kwaye sikuxelele yonke into ekufuneka uyazi malunga ne-psychopath. […] Kaninzi
Ndiyakuvuyela. Ufikelele esiphelweni se-intanethi.
Ukuzilolonga KuyiNzuzo Njani Kwimpilo Yam Yengqondo?
Ungawulungisa njani uMtshato ngeNarcissist [13 Tips]
Iindlela ezili-12 zokulungisa umtshato emva kobuxoki
Iindlela ezili-10 zokulungisa umtshato oqhawukileyo ngokweBhayibhile
Iindlela ezili-12 zokulungisa umtshato kuMda woqhawulo-mtshato
Iindlela ezili-12 zokulungisa umtshato wakho ngaphandle kokucetyiswa
Ungawulungisa njani Umtshato Wakho Xa Ukuthembana Kwaphukile
Uwuyeka Njani Umyeke UThixo Alungise Umtshato Wakho? [FUMANISA]
Indlela Yokulungisa Ukuthembana Emtshatweni
Uwulungisa njani umtshato wam noMyeni
Advice Hlukala Dating amaphupha izipho iiholide Amahlaya IiHack Life yokuPhila uthando umtshato imiyalezo bengqondo Imidlalo yemibuzo Imibuzo kuchaphulo Romance sex Education
Apha uya kufumana lonke ingqokelela oyenzileyo ngaphambili.